မွနျမာနိုငျငံ၏ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကိုဆောငျရှကျလကျြ ရှိသဖွငျ့ နှဈနိုငျငံ ဆကျဆံရေးကောငျးမှနျနရေုံသာမက ပွညျသူမြားအခငျြးခငျြး ဆကျဆံရေးကောငျးမှနျရနျလိုအပျ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
နိုဝငျဘာ ၇၊ ၂၀၁၈ မေ ၃၀၊ ၂၀၂၀
မွနျမာနိုငျငံ၏ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကိုဆောငျရှကျလကျြ ရှိသဖွငျ့ နှဈနိုငျငံ ဆကျဆံရေးကောငျးမှနျနရေုံသာမက ပွညျသူမြားအခငျြးခငျြး ဆကျဆံရေးကောငျးမှနျရနျလိုအပျ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၇
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်နေရုံသာမက ပြည်သူများအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရန် လိုအပ် ကြောင်း၊ ထို့အပြင်တိုင်းရင်းသားများအားလုံးနှင့် ကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံရေးရှိရန်နှင့်တိုင်းရင်းသား ဒေသများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အလေးထားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Song Tao အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ရွှေစံအိမ်ဟိုတယ်၌လက်ခံတွေ့ဆုံရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းထွန်းဦး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ၀န်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang နှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဦးစွာဧည့်သည်တော်ဝန်ကြီးက မြန်မာ့တပ်မတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေး၊ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရေးကြီးသည့်အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လျက် ရှိသည်ကိုသိရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီအနေဖြင့် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့်ဆက်ဆံရေး ကို အထူးအလေးထားပါကြောင်း၊ ယခုချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိနိုင်ငံရေး အင်အားစု အသီးသီးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟုယုံကြည်ပါ ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံနှင့်တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားဆက်ဆံမှု တိုးတက်ခိုင်မာစေရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများတွင် မြန်မာတပ်မတော် နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံသည် မိတ်ဆွေဟောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်းနိုင်ငံများဖြစ်သဖြင့် ရှိရင်းစွဲကောင်းမွန်သည့်ဆက်ဆံရေးကို မထိခိုက်ရန်နှင့် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ရပ်တည်ချက်ကို ယခုထက်ပိုမို မြှင့်တင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ အချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ ပြည်သူချင်းရင်းနှီးမှု၊ တိုင်းရင်းသားချင်းရင်းနှီးမှုများကိုပါ မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ရန်အကြံပြုပြောကြားလိုကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လိုအပ်ချက်များ အား ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုကြောင်း၊ မိမိ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ မစ္စတာရှိကျင့်ဖျင်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ်ကလည်း မိမိတို့ နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး တို့အတွက် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ နယ်စပ်ဒေသတွင်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသား များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုကြောင်း၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်အတွက် တပ်မတော်အနေဖြင့် အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုသည်မှာ လက်နက်ကိုင်တောင်းဆို၍မရဘဲ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်သာဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းနေမှုအခြေအနေများနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်အတွက် အစိုးရနှင့်တပ်မတော်မှဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေ များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ နှစ်နိုင်ငံနှင့်နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြ သည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Song Tao အား အလုပ်သဘောနေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံသည်။ နေ့လည်စာသုံးဆောင်အပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။
မွနျမာနိုငျငံ၏ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကိုဆောငျရှကျလကျြရှိသဖွငျ့ နှဈနိုငျငံ ဆကျဆံရေးကောငျးမှနျနရေုံသာမက ပွညျသူမြားအခငျြးခငျြး ဆကျဆံရေးကောငျးမှနျရနျ လိုအပျ ကွောငျး၊ ထို့အပွငျတိုငျးရငျးသားမြားအားလုံးနှငျ့ ကောငျးမှနျသညျ့ ဆကျဆံရေးရှိရနျနှငျ့တိုငျးရငျးသား ဒသေမြားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးကို အလေးထားပူးပေါငျးဆောငျရှကျရနျလိုအပျကွောငျးဖွငျ့ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျက တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ တရုတျ ကှနျမွူနဈပါတီ၊ နိုငျငံတကာ ဆကျဆံရေးဝနျကွီး H.E. Mr. Song Tao အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ရှစေံအိမျဟိုတယျ၌လကျခံတှဆေုံ့ရာတှငျ ထညျ့သှငျးပွောကွားသညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး သနျးထှနျးဦး၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျော အရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ၊ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေး ဝနျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ တရုတျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Hong Liang နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ ဦးစှာဧညျ့သညျတျောဝနျကွီးက မွနျမာ့တပျမတျောသညျ မွနျမာနိုငျငံ၏နိုငျငံရေး၊ နိုငျငံတျောတညျငွိမျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ အရေးကွီးသညျ့အခနျးကဏ်ဍတှငျ ပါဝငျလကျြ ရှိသညျကိုသိရှိပါကွောငျး၊ မိမိတို့တရုတျ ကှနျမွူနဈပါတီအနဖွေငျ့ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ဆကျဆံရေး ကို အထူးအလေးထားပါကွောငျး၊ ယခုခဈြကွညျရေးခရီးစဉျတှငျ မွနျမာနိုငျငံရှိနိုငျငံရေး အငျအားစု အသီးသီးနှငျ့တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးကို ပိုမိုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျနိုငျမညျဟုယုံကွညျပါ ကွောငျး၊ နှဈနိုငျငံနှငျ့တပျမတျောနှဈရပျအကွားဆကျဆံမှု တိုးတကျခိုငျမာစရေေး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးမြားတှငျ မွနျမာတပျမတျော နှငျ့ပူးပေါငျးဆောငျရှကျ သှားမညျဖွဈကွောငျးပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာ-တရုတျနှဈနိုငျငံသညျ မိတျဆှဟေောငျး၊ မိတျဆှကေောငျးနိုငျငံမြားဖွဈသဖွငျ့ ရှိရငျးစှဲကောငျးမှနျသညျ့ဆကျဆံရေးကို မထိခိုကျရနျနှငျ့ ဆကျလကျထိနျးသိမျးဆောငျရှကျသှားရမညျဖွဈကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ နိုငျငံရေးပွုပွငျပွောငျးလဲမှု မြားတှငျ တရုတျနိုငျငံ၏ရပျတညျခကျြကို ယခုထကျပိုမို မွှငျ့တငျရနျနှငျ့ နိုငျငံရေးအငျအားစုမြား အခငျြးခငျြး ခဈြကွညျရငျးနှီးမှု၊ ပွညျသူခငျြးရငျးနှီးမှု၊ တိုငျးရငျးသားခငျြးရငျးနှီးမှုမြားကိုပါ မွှငျ့တငျ ဆောငျရှကျရနျအကွံပွုပွောကွားလိုကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုအတှကျ လိုအပျခကျြမြား အား ဆောငျရှကျပေးစလေိုကွောငျး၊ မိမိ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံသမ်မတ မစ်စတာရှိကငျြ့ဖငျြနှငျ့ တှဆေုံ့စဉျကလညျး မိမိတို့ နိုငျငံတညျငွိမျအေးခမျြးရေး၊ စညျးလုံးညီညှတျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေး တို့အတှကျ ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာဆှေးနှေးပွောကွားခဲ့ကွောငျး၊ နယျစပျဒသေတှငျရှိသညျ့ တိုငျးရငျးသား မြားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျဆောငျရှကျပေးရနျလိုကွောငျး၊ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး ရရှိရနျအတှကျ တပျမတျောအနဖွေငျ့ အလေးထားဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး၊ ငွိမျးခမျြးရေး ဆိုသညျမှာ လကျနကျကိုငျတောငျးဆို၍မရဘဲ ဆှေးနှေးခွငျးဖွငျ့သာဆောငျရှကျနိုငျမညျ ဖွဈကွောငျးပွောကွား သညျ။
ယငျးနောကျ နှဈနိုငျငံခဈြကွညျရငျးနှီးမှုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ ဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးပျေါတှငျ လြှောကျလှမျးနမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေး ရရှိရနျအတှကျ အစိုးရနှငျ့တပျမတျောမှဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနေ မြား၊ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ တရုတျနိုငျငံ၏ ရပျတညျဆောငျရှကျခကျြမြား၊ နှဈနိုငျငံနှငျ့နှဈနိုငျငံတပျမတျော နှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုပိုမိုတိုးတကျခိုငျမာအောငျ ဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာအမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွ သညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ၊ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးဝနျကွီး H.E. Mr. Song Tao အား အလုပျသဘောနလေ့ယျစာဖွငျ့ တညျခငျး ဧညျ့ခံသညျ။ နလေ့ညျစာသုံးဆောငျအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ၊ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးဝနျကွီးတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျ ပေးအပျခဲ့ကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ကြိုငျးတုံမွို့ ဓမ်မောဒယပရိယတ်တိစာသငျတိုကျ ဦးစီးပဓာနနာယကဆရာတျော အဂ်ဂမဟာပဏ်ဍိတဘဒ်ဒန်တအာဇယြေ၏ ဥတုဇရုပျကလာပျတျောအား ဖူးမွျောကွညျညို
စကျတငျဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၇ Admin 0
၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး၊ ရေ၊ လေ)မိသားစုမြား ဝါဆိုသင်ျကနျး ဆကျကပျလှူဒါနျးပှဲကငျြးပ
ဇူလိုငျ ၁၀၊ ၂၀၁၉ Admin 0